ခင်မင်းဇော်: May 2008
ဓါတ်ပုံကို ဒီက ယူပါတယ်
Posted by ခင်မင်းဇော် at 1:03 AM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:31 AM No comments:
နိုင်ငံခြားသား ကယ်ဆယ်ရေးသမားအားလုံး ၀င်ခွင့်ပြုပြီတဲ့...
ဗီဇာ ၃ ရက်ပဲ ပေးမယ်ဆိုလား..... ဆိုလား...ဆိုလား...
ကြားထားတာ ပြောပြတာ... သူတို့က ခပ်ရှုပ်ရှုပ် လုပ်တတ်တယ် ဆိုတော့......
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:25 AM No comments:
ဒီလို အပြီး ထည့်ပြီးသားနဲ့ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးရမယ်တဲ့။ နိုင်ငံတော်အတွက် မရေးတတ် မခြစ်တတ် မထည့်တတ်မှာ စိုးလို့ စေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာ....
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:15 AM No comments:
ငြိမ်းစုဘလော့ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:30 PM 1 comment:
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးလဲ ဒီလို ခေတ်မီနေဆဲပါ..
အမိုးများပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း မပြုရသေးသော ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး
နအဖက ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရွာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းမပို့နိုင်တာ ထားလိုက်ပါဦး။ ဒီပုံတွေထဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ အမိုးတွေတောင် ဒီနေ့မေလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ပြန်လည် တပ်ဆင်ပေးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရအောင် မအားဖြစ်နေတာလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား....?
ထောက်ခံမဲ ၉၀ ရာနှုန်းကျော်ရနေလို့ မဲစာရွက်တွေကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ရေတွက်နေရတာလေ အားဘူး တဲ့။
နောက် .. နိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေ ရောက်နေတာ အများကြီးပဲ..
အဲဒါတွေကိုလဲ သင့်တော်ရာ ဈေးနဲ့ ထုခွဲရောင်းချ ပေးရသေးတယ်...
ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ် ဖြစ်လာတာ မနာလိုမရှိကြပါနဲ့..
ဟိုဒုက္ခသည်တွေဆီပေးလဲ သူတို့က ဒါမျိုးသုံးတတ်စားတတ်တာမှ မဟုတ်တာ။
ဒီတော့ သုံးတတ်စားတတ်သူတွေ ပဲ စားပါစေ၊ စေတနာဆိုတာ ထားတတ်မှ..
နအဖဆီကို သွားခဲ့တဲ့ ထိုင်း ၀န်ကြီးချူပ်.... နအဖရဲ့ စီမံကွပ်ကဲမှုတွေကို လေးစားမိပါတယ်ဆိုပဲ....
ဆမတ်က ဘယ်လို မျက်စေ့နဲ့ ကြည့်မိပါလိမ့်...
အော်..... သူလဲ အသက်ကြီးပြီဆိုတော့....
အမြင်အာရုံ ၊ အကြားအာရုံတွေ ချို့တဲ့နေတာများလား။
ကျမတို့နိုင်ငံက ဘဘသန်းရွှေနဲ့ဘရိတ်ဒန့် လမ်းလျှောက်တာများ ပြိုင်လာခဲ့သေးလားမသိ.....
(ဓါတ်ပုံပေးပို့ပေးသော ရန်ကုန်မှ မိတ်ဆွေကြီးအားကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ဒီပုံကို မည်သူမဆို ယူသုံးနိုင်ပါသည်။)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:46 PM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:41 PM No comments:
နအဖရဲ့ အသုံးမကျမှု ကတော့ ပြောစရာ စကားလုံးတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ခုလို လူတွေ သေကြတာကိုပဲ သူတို့က ကြိတ်ဝမ်းသာ ချင် ၀မ်းသာနေဦးမှာပါ။ တကယ့် တိုင်းပြည်က အကြီးဆုံးနေရာ ယူထားတဲ့ သန်းရွှေဆိုတဲ့ အာဏာရူးကြီး ခုချိန်ထိ ပြည်သူတွေကို ဘာစကားထွက်ပြောသလဲ။
၀မ်းနည်းကြောင်း စကားတခွန်း တောင်းပန်ကြောင်း စကားတခွန်းပြောခဲ့ပါသလား။
ဒီလို တာဝန်ယူချင်စိတ်မရှိပဲနဲ့ ဘုရင်ရူး ရူးချင်နေသေးတယ်...
ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်နေတာကို အများက ကူညီပါ့မယ်ဆိုတာတောင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ရှိပြီးသားတဲ့။
ဒါ့ကြောင့် ငွေတွေ ပစ္စည်းတွေသာပေးပါတဲ့။ ဒါလား ပြည်သူတွေကို ရင်ဝယ်သားလိုချစ်တာ.........။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို သူတို့လောက်ချစ်တတ်တာ သူတို့လောက် ကာကွယ်တတ်တာ မရှိတော့ဘူး။
လက်တွေ့မှာ သူတို့ ဆောက်နေတဲ့ အနုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖို ကိစ္စပေါ်သွားမှာ စိုးနေတာ ၊ လူမိသွားမှာ စိုးနေတာ။
သူတို့ ကလိမ်ကျသမျှ ပေါ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတာ...
အံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူး။ အာဏာရှင်တွေဆိုတာ ဒီလိုပဲ ဆိုတာ ပိုပြီး လူထုကသိသွားတာပေါ့လေ။
မဲလိမ်ချင်လဲ လိမ်လိုက်ပါ။ ခု ချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေက သိနေပြီးသား ၊ သူတို့ တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို ။
ဒုက္ခသည် တွေအတွက်ပေးတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်း လေယာဉ် ၂ စင်းစာကို သူတို့တွေအတွက် ယူရက်သေးသတဲ့...
ှရှက်တတ်တဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တော့လဲ ခက်တာပေါ့...
လူတွေက သူတို့ကို မယုံလို့ သူတို့လက်မအပ်တာလဲ သိသိချည်းနဲ့ .... ခုလိုလုပ်ပြနေတော့ ဘယ်သူက အပ်ချင်ပါဦးမလဲ...
အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုနဲ့ နောက်လိုက်ငယ်သားကြံ့ဖွတ် အပေါင်းတို့..
နောက်လာမယ့် ABe (အက်ဘီ) မုန်တိုင်းမတိုင်ခင်တောင်မှ နင်တို့ အသက်ရှင်သန်မှု ရေရှည်ပါ့မလား ...
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေတဲ့ တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ၀ဋ္ဋ် မင်းတို့ အမြန်ဆုံး လည်ပါတော့မယ်..
ခုလို ကပ်ဆိုးမျိုးဟာ မင်းဆိုး မင်းညစ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ထင်ရှားသိနေရပါပြီ။ သူတို့ကို မထိပဲ ပြည်သူကို ထိတာကလဲ ပြည်သူတွေက ဒီလိုလူမျိုးတွေကို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်....
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ရှင်သန်မှုကို ဘယ်လိုမှ မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အာဏာရှင် အုပ်စိုးသူ စစ်အုပ်စု လက်အောက်မှာ
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပေမယ့် ဘ၀သေနေတဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူသွေးချင်း မောင်နှမတွေအတွက်...
အသက်ရှင်သန်သမျှကာလပတ်လုံး ဒီစစ်အုပ်စုကို ဖြုတ်ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမှန်သမျှ မလျှော့သော ဇွဲနဲ့လုပ်ဆောင်သွားကြပါ......
ကျမအနေနဲ့လဲ လုပ်ဆောင်သွားပါ့မယ်လို့ ..
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:06 PM 1 comment:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:54 PM7comments:
နာဂစ် မုန်တိုင်း သွားရာလမ်း
ကျမတို့မြို့ပုသိမ်မှာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က လဲ မုန်တိုင်းတခု ၀င်ရောက်သွားခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက လေတိုက်နှုန်း တနာရီ မိုင် ၁၀၀ ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။ အခု နာဂစ်ကတော့ တနာရီ မိုင် ၁၂၀ နဲ့ ၁၅၀ ၀န်းကျင်လို့ မှန်းထားပါတယ်. တကယ်တော့ မုန်တိုင်း ဖြစ်ခါနီးဆိုရင် မိုးတွေ ဆက်တိုက်ရွာ တတ်တာကြောင့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားနီးသူတွေအနေနဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ ရတတ်တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းကိုသာ မခန့်မှန်းတတ်ကြတာပါ။ နောက်ပြီး မုန်တိုင်းက မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု လုပ်ဖို့က သိပ်များများစားစား မရှိပါဘူး။ ကမ်းနားနေသူတွေ အတွင်းပိုင်း ပြောင်းရွှေ့နေမယ်။ သစ်ပင်ကြီးကြီးနား က အိမ်တွေ လွတ်ရာရွှေ့နေမယ် ဒီလောက်ပဲ လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ကျန်တာကတော့ အိမ်တိုင်း ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းထုတ်ပြီးရေမစိုအောင် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မိုးကာ တွေနဲ့ အုပ်ကာ ထားကြရတာပါပဲ။ လေတိုက်လို့ အမိုးတွေ လန်ကုန်ရင် မစိုသင့်တာ မစိုရအောင် ပြင်ဆင်တာနဲ့ ထမင်းကို များများချက်ထား၊ ကြိုစားထား ဒီလောက်ပဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်ဆို မီးကိုလဲ ဖြတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
အခုအချိန်အခါလို ကြိုတင် သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ မလျှင်မြန်တဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် မုန်တိုင်းတုန်းက ပုသိမ်မှာ တော်တော် ခံလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်တွေ က သွပ်မိုးတွေ လန်ပြီး လေထဲမှာ လွင့်မျောနေတာကို လိုက်ပြီးကောက်တဲ့လူတွေ ရှိသလို အဲလိုလိုက်ကောက်ရင်း သွပ်ပြားပျံက နီးစပ်ရာကို တိုက်ဖြတ်သွားတာကိုလဲ ကြားဖူးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သစ်ပင်တွေအကုန်လဲနေတော့ နောက်တနေ့ ကားလမ်းတွေ အကုန်သွားမရဖြစ်နေတာ။ ကောင်းကင်တခုလုံးလဲ လင်းချင်းနေတာ( ခါတိုင်းက သစ်ပင်တွေ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရတဲ့နေရာတွေ မြင်နေရတာကိုး)။ ဘယ်သူ့အိမ် အမိုးတွေ အကုန် ကုန်တာပဲ။ ဘယ်သူ့အိမ်ကတော့ ယိုင်သွားတယ်၊ ဘယ်သူတွေ ထမင်း ငတ်သွားတယ်နဲ့ နောက်နေ့တွေမှာ ပြောမဆုံးကြပါဘူး။ လေတိုက်တာ အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက်တံခါးတွေ အကုန်ဖွင့်ထားရင် လမ်းတောင်လျှောက်လို့မရပဲ အလယ်က တိုင်ကို ဖက်ထားရတယ်။ နောက် ကျောင်းတွေမှာ အမိုးတွေ အကုန်မရှိတော့ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေ နောက်ဆုတ်လိုက်တာကို မှတ်မိနေပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုတော့ လမ်းတွေမှာ လျှောက်သွားကြည့်ပြီး ပျော်နေကြတာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လူကြီးတွေကတော့ အမိုးပြန်မိုးဖို့၊ ပြိုကျတဲ့ အိမ်တွေ ပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ ၊ နောက် ရေစိုပျက်စီးသွားတာတွေကို အစားထိုးဖို့ တော်တော် စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုတာ ခုချိန်မှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တာပါ။
ခု နာဂစ် မုန်တိုင်း ကို ပြည်ပက လူတွေကသိတော့ သတိပေးဖို့ ဆိုပြီး ဂျီတော့က လာပြောကြပါတယ်။ ဖုန်းတွေလဲ ခေါ်မရ ဖြစ်နေတော့ စိတ်မပူဖို့နဲ့ မုန်တိုင်းဟာ အိမ်ထဲကပဲ ထမင်း စောစော စားပြီး စောင့်နေရတဲ့ အမျိုးလို့ အားပေးလိုက်ရပါတယ်။ မုန်တိုင်းက အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ မနေနိုင်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေ ပိုပြီး အထိနာစေပါတယ်။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာကလည်း အခြေခံလူတန်းစား ဆင်းရဲတဲ့လူ များတော့ လူများစု အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ရတော့မှာပါ။ အင်း သတင်း တွေ ရလာရင်တော့ ပိုတိတိကျကျ သိရမှာပါ။ ခုကတော့ ခန့်မှန်းလို့ပဲ ရနိုင်ဦးမယ်။
နအဖကတော့ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အမျိုးသားအဆင့်ပြုလုပ်ရန်ဆိုပြီး ၄/၂၀၀၈ ထုတ်ပြန်နေတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကျရောက်သော ဇုံအဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် တွေကို သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းနဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ အရှေ့ေ့မြာက်ဖက်မှာ ကုန်းတွင်းပိုင်း မုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်လက် တည်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့အကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ရှင်.......
သတင်းတွေ သိချင်ရင် ဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါဦး။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 3:43 PM 1 comment: